प्रेगनेन्सी जाँच कसरी गर्ने?
On: २०७६ फाल्गुन १४ गते, बुधबार, ११:३३ बजे प्रकाशित
काठमाडौँ। पिरियड अर्थात मासिक श्राव एक निश्चित अवधीमा हुने गर्छ। कसैलाई २८ दिनमा त कसैलाई ३२ दिनमा पनि मासिक श्राव हुनसक्छ। २८ देखि ३२ सम्मको समयावधिलाई सामान्य मानिन्छ। तर, जब नियमित रुपमा भइरहेको मासिक श्राव निश्चित समय हुँदैन, हामीमा अनेक आशङ्का उब्जन्छ। पहिलो आशङ्का, कतै गर्भ त रहेन?
खासगरी विवाहित महिलामा यस्तो प्रश्न उब्जन सक्छ, जो नियमित सहवासमा हुन्छिन्। यससँगै उनीहरूको मनमा अर्को प्रश्न आउँछ, मासिक श्राव भएको कति दिनपछि गर्भ रहन्छ? गर्भवती भएको कसरी थाहा पाउने? महिनावारीको कति दिनपछि वा अघि प्रेगनेन्सी टेस्ट गर्ने?
पिरियड अघि प्रेगनेन्सीबारे कसरी थाहा पाउने?
पिरियड मिस हुनासाथ गर्भ रह्यो वा रहेन भनेर स्पष्ट हुनका लागि बजारमा केही किसिमका प्रेगनेन्सी टेस्ट किट पाइन्छ। यसको माध्यमबाट पिरियड अघिको प्रेगनेन्सी थाहा हुन्छ। प्रेगनेन्सी टेस्टका लागि सही समय चाहिन्छ। यदि समयभन्दा अगाडि नै टेस्ट गरियो भने त्यसको नतिजा गलत पनि आउनसक्छ। पेगनेन्सी टेस्ट किटबाट पिरियड मिस भएको पाँच दिन पछि महिलामा गर्भ रहेको वा नरहेको थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसबेला आएको नतिजा सही हुनसक्छ। गर्भ रहेको लक्षण देखियो भने मासिक श्राव हुनुअघि नै प्रेगनेन्सी टेस्ट गर्न सकिन्छ। यदि रिजल्ट नेगेटिभ आयो भने मासिक श्राव मिस भएपछि प्रेगनेन्सी टेस्ट गर्न सकिन्छ।
मासिक श्राव भएको कति दिनपछि जाँच गर्ने?
जब महिला प्रेगनेन्ट हुन्छ, तब उनको शरीरमा एचसिजी हर्मोन बढ्छ। यही हर्मोनको आधारमा महिला गर्भवती भएको थाहा हुन्छ। पिरियड मिस भएपछि पहिलो दिन महिलाको शरीरमा यस हर्मोनको मात्र यति धेरै बढ्छ कि, प्रेगनेन्सी टेस्ट गर्न सकिन्छ। प्रेगनेन्सीको सटीक जानकारी पाउनका लागि पिरियड लेट भएको केही दिनसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ। सही रिजल्ट पाउनका लागि पिरियड मिस भएको पाँच वा १० दिनमा प्रेगनेन्सी टेस्ट गर्नुपर्छ।
पिरियडपछि प्रेगनेन्ट हुने सही समय
मासिक स्राव भइसकेपछिको समय गर्भवती हुने सही समय हो। यदि पिरियड पाँच दिनसम्म चल्यो र त्यसपछि तुरुन्तै पार्टनरसँग सम्बन्ध भयो भने, गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ। मासिक श्राव सकिएको ११ दिनपछि पनि शारीरिक सम्पर्क भयो भने गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ। पिरियड सुरु हुनुअघि लगभग १२ देखि १४ दिनअघि ओभ्युलेशनको समय हुन्छ, जो पिरियडको सात दिनअघिसम्म रहन सक्छ। यस अवधीमा यदि शारीरिक सम्पर्क भयो भने गर्भ रहने अधिक सम्भावना हुन्छ।
मिस हुनासाथ प्रेगनेन्सीको पहिलो लक्षण के हो?
स्तनमा भारीपन महसुस हन्छ। बढी थकानको अनुभव हुन्छ। वान्ता हुने धेरै पिसाब आउने कब्जियत हुने, पेटमा ग्यास हुने, छातीमा जलन हुने, मुखको स्वाद बिग्रने जस्ता अनुभुति हुन्छ।
२०७६ फाल्गुन १४ गते, बुधबार, ११:३३ बजे प्रकाशित